कसरी एक कार को पाङ्ग्रा राख्न?
सडकको महत्वपूर्ण अवस्था प्रतिक्रिया समय मा, यो स्टेरिड़ कसरी पकड जान्न महत्वपूर्ण छ। जब दोस्रो को खर्च मा बहाव वा अचानक खतरा आउँछ। चालक प्रतिक्रिया को सानो घर र सहज सिट मा microclimate को प्रभाव अन्तर्गत कठोर। वास्तविकता संग नष्ट स्पर्श, वरिपरि के distantly कथित भइरहेको छ।
हामी किन मागहरू खडा गर्न ख्याल गर्नुपर्छ?
को स्टेरिड़ समाउँदै, जब ड्राइभिङ विद्यालयमा प्रशिक्षण थप देखाउँछ। स्थान को हात व्यावहारिक उदाहरण को महत्व साबित भयो। शोधकर्ताओं कुनै सतर्कता हराएको छ जसमा चालक, को अधिकतम स्थिति गणना। अचानक व्यवस्थापन कारण समसामयिक समायोजन गर्न नष्ट छैन, अगाडि पाङ्ग्रा एक आश्चर्य हुने छैन punctured।
को स्टेरिड़ समाउँदै - पहिलो नियम, जो संग व्यावहारिक ड्राइभिङ निर्देशन सुरु गर्न छ। सुरक्षा साथै सहज मुद्रा सचेत हुन मद्दत गर्छ, सामान्य रक्त अवलोकन। दुर्घटना को बहुमत गर्न यो पेडल र स्टेरिड़ गर्न खुट्टा र हातहरू बाटो आन्दोलनहरु थपिएको छ जोखिम निर्धारण गर्न समय अभाव कारण आउँदैन।
अवैतनिक गलत भिन्न
को स्टेरिड़ समाउँदै, सबै newcomers थाहा छैन। पनि नियन्त्रण लगभग तल पर्यो छ जसमा सबैभन्दा तनावमुक्त स्थिति चयन गर्न प्रयास को अनुभव चालक। यो मुद्रा देखि खडा र कठिन हुनेछ सुस्त गर्न सुरु गर्न। को स्टेरिड़ कम्तिमा 360 डिग्री घुमाउन आवश्यक छ जब एक पकड तेज युद्घाभ्यास व्यावहारिक असम्भव छ।
मानिसहरू अक्सर एक हातले व्यवस्थापन र आफ्नो औंला संग स्टेरिड़ पकड गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर, जब एउटा अवरोध मा चलिरहेको (curb, प्वाल, लीक) कार धेरै "kidanut" हुन सक्छ तर्फ। यो अवस्था गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ गर्दा मानिसहरू बाटोमा छन्।
को spokes स्टीयरिंग बीच ब्रश रिम भित्र स्थिति, कडा निरुत्साहित। जब एउटा आपतकालीन एक गहन परिक्रमा, सक्षम छ हात तोडने। बस सवारी चलाउँदा कसरी स्टेरिड़ पकड थाह, तपाईं आफूलाई, यात्रु र अरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
विषय छलफल गर्दा "कसरी स्टेरिड़ मा आफ्नो हात राख्न" अक्सर प्रश्न छ। आखिर, समायोजन को सँग उचित व्यवस्था अनावश्यक बन्नेछ। तर, यो व्यवस्था को स्पष्ट कमियां बावजुद, अनुभवी सवार नाटकीय 200 मी / घन्टा मा speeding, मेशिन को बाटो को trajectory परिवर्तन गर्न समय छ।
व्यवसायी माथि आफ्नो हात राख्दै, दुवै हात संग हैंडल को विपरीत पक्षमा रहन प्रयास गर्नुहोस्। ब्रश को मंडल को माथिल्लो भागमा तिर अलिकति सारे छन्। यो मुद्रा तपाईं पालो मा आन्दोलनहरु को एक न्यूनतम आवश्यकता हुनेछ जो मामला मा आपतकालीन को मामला मा अधिकतम प्रतिक्रिया, सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईं एक शक्ति एम्पलीफायर लागू शक्ति बिना कार चलाउनु योजना यदि कार को स्टेरिड़ समाउँदै थप जान्न महत्वपूर्ण छ। डामर मा पाङ्ग्रा को घर्षण हटाउन समय हराएको छ। हाइड्रोलिक वा बिजुली ड्राइव को उपस्थिति मा अक्सर बाटोमा कार स्थिति को भावना सम्झना गर्न सक्छ। पनि खातामा लिएको:
गति को गति;
सडक सतह गुणस्तर;
वजन परिवहन (लादेन कार भारी नियन्त्रण);
वर्ष को समय।
गति मा शरीर को स्थिति
लामो यात्रा लत्तो, तर राजमार्ग मा उच्च गति विशेष एकाग्रता आवश्यक छ। मूल्य slightest गल्ती लङ्गडो destinies र मान्छे को जीवन हुन्छन्। अक्सर चालक रिम आधारमा ब्रश राखे, तर प्वाल पार्ने काम विरुद्ध बीमा हासिल गर्न सकिँदैन।
जब हात तल वा मध्य भाग मा हो, धारिलो पालो प्रवेश गर्न गाह्रो छ। स्थिति सडक वा पाङ्ग्रा ruts संग सम्पर्क अनियमितताहरु द्वारा जटिल छ। असुरक्षित जस्तै युद्घाभ्यास गर्दा एक ब्रश समातेर।
बाहेक backrest पनि सीमा ढल्केको भने, चालक नियन्त्रण प्राप्त र इच्छित स्थिति लिन केहि सेकेन्ड हुनेछ। र 90 मी / घण्टा को एक गति मा यस्तो समयमा, सबै कुरा तुरुन्तै हुन्छ। प्रतिक्रिया ढिलाइ हिजो गरेको रगत रक्सी स्तर वा गरिब स्वास्थ्य को प्रभाव अन्तर्गत विस्तार गरिएको छ।
युद्घाभ्यास को क्षण मा शरीर स्थिति
खोल्दै जब स्टेरिड़ समाउँदै? यसलाई जब डामर सतह संग कार बरफ छोपेको भूमि मा हुन्छ यो जाडो समयमा यो मुद्दा, सामना गर्न विशेष महत्त्वपूर्ण छ। नियन्त्रण प्राप्त गर्न, चालक प्रति सेकेन्ड धेरै पूर्ण परिक्रमा बनाउन। एक अनियन्त्रित स्किड को स्थिर, त्यहाँ जोखिम भन्दा अन्य कुनै पनि स्थिति मा हात राख्दा।
सर्कल को या त पक्षमा सजिलो एक बारी हात मा Maneuvers प्रदर्शन। पाङ्ग्रा र प्रयासहरू बाहिर पर्ची र पाङ्ग्रा पंक्तिबद्ध। ब्रश अक्सर अन्य माथि एक हो, त्यसैले ड्राइभर आगामी कार्य को लागि तयार भएको छ।
कांग्रेस गएपछि संवाददाता हात अन्य भन्दा अलिकति उच्च छ। यो पहिलो स्टेरिड़ रिम मा दबाव पार्छन् गर्न थाल्छ। सही-हात को बदल वृद्धि गर्न ब्रश उलटफेर को समयमा राखिन्छ रहनेछ। ड्राइभर को युद्घाभ्यास प्रदर्शन गर्न समय कम र राम्रो बाटोमा स्थिति आकलन गर्न अनुमति दिन्छ जो गति को trajectory, मा परिवर्तन को लागि तयार गर्न समय छ।
विकल्पहरू स्थान ब्रश
हात को सुख - को यात्रा को छैन मुख्य उद्देश्य। अक्सर विकर्ण मा हात समात्नु - यो एक लीक मा तेज overtaking वा सम्पर्क पाङ्ग्रा मा कार मा अप्रत्याशित उतार चढाव गर्न जान्छ। यो कारणले गर्दा यो बिन्दुमा ड्राइभर को मंडल साथ आफ्नो औंलाहरु बाहिर क्रमबद्ध गर्न प्रयास गर्दै छ भन्ने तथ्यलाई हुन्छ। उहाँले पनि सीधा आयोजित हुनुपर्छ र कार गल्ति भएको pits तिर सारे।
एक मार्गदर्शन गियरबक्सलाई संग वाहन बायाँ हात सधैं स्टेरिड़ लक गर्दछ। यो माथि वा रिम तल छ भने, क्षणमा गति चयन लीवर व्यक्ति सडक संग जडान एक अर्थमा गुमाउन सक्छ। यस्तो विवरण, धेरै ध्यान छैन, तर तपाईं स्ट्रिम अर्को कार "प्राप्त प्रयोग" बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
अनुभवी चालकहरू नियमहरूमा तोड्न, तर तथ्याङ्क प्रमुख दुर्घटना को बहुमत मा अनुभव को धेरै ड्राइभिङ मानिसहरूलाई दोष भनेर देखाउँछ। कि मानव प्रयोग धक्का राम्रो कौशल छ। skidding को कगार मा सन्तुलित, को लापरवाह चालक आफ्नो सीप परीक्षण गर्न प्रयास।
ड्राइभिङ गर्दा स्टेरिड़ समाउँदै, केही novices बलियो रिम लो गर्न प्रयास, एक्स्ट्रानिअस छनकहरू बिना बुझ्छु। ड्राइभिङ धेरै उपयोगी छ, जबकि चेतावनी हुन: एक अवसर अवस्था कुनै पनि समयमा हुनसक्छ। यो एक पैदल हुन सक्छ, अचानक हुड, वा रातो प्रकाश मार्फत ड्राइव निर्णय गर्ने लापरवाह चालक, को अगाडि कूद।
त्यहाँ जब कार विपरीत लाइन मा हुन सक्छ प्रभाव एक पक्ष समानान्तर को एक महत्वपूर्ण जोखिम छ। उठाएको गलत हात अचानक onslaught राख्न अनुमति छैन। तपाईं स्टेरिड़ लो समय छैन भने, स्थिति नियन्त्रण बाहिर, र यो टाउको-मा ठक्कर खतरनाक। यो दुर्घटना सबै दुर्घटना को deadliest छ।
को स्टेरिड़ एक हातले ड्राइभिङ लागि डिजाइन गरिएको छैन। हामी निरन्तर विचलित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तपाईं स्थान सेट गर्न ब्रश फर्कन प्रयास गर्नुपर्छ। यो गाडीको अगाडीको शिशा wipers काम गर्न संकेत बारी, मुख्य स्विच र राति डूबा थप सुविधाजनक छ। तपाईं सुरक्षित रेडियो वा वातानुकूलन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने।
यो व्यवसायीक ध्यान केन्द्रित गर्न राम्रो छ: तिनीहरूले थाह छ स्टेरिड़ कसरी पकड। फोटो र भिडियो racers, skidding गर्दा अनियमितताहरु वा तरिकामा अवरोध को घटना विजयी दोस्रो कि अंश अक्सर कार को अगाडी भाग्य निर्णय देखाउँछ।
को सवार धेरै गाह्रो भएको स्टेरिड़ पकड। सामान्य ड्राइभिङ त्यसैले पकड कुनै आवश्यकता छैन, यो रिम वरिपरि ब्रश समाधान गर्न suffices। एक सानो विश्राम अन्यथा चालक चाँडै थकित प्राप्त हुनेछ, वर्तमान हुनुपर्छ। आन्दोलन को बाटो बाट विचलन, बारी जब दबाव मात्र वृद्धि र अन्य Maneuvers।
चालक आफ्नो प्रकृति अनुसार मिसिन सञ्चालन गर्न accustomed छन्। मनोवैज्ञानिक त्यहाँ हात को स्थिति र एक व्यक्तिको आन्तरिक स्थिति बीच सम्बन्ध छ भनेर पाएका छन्। अरूलाई अनुभव देखाएर बाहिर खडा गर्ने प्रयास बिना सही स्थिति प्रयोग छिटो शान्त अवस्थामा हुन सक्छ प्राप्त। किनभने यो मानिसहरूको जीवन प्रभावित यो आफूलाई दुर्घटनामा रोक्न मौकाको वंचित गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
गर्मी बन्दूक डिजेल: सञ्चालनको सिद्धान्त, उत्कृष्ट मोडेल र समीक्षा समीक्षा
केबिन फिल्टर, "माज्दा 3": सुविधाहरू, प्रतिस्थापन र सिफारिसहरू
ठंडा सिस्टम 2110, सञ्चालन सिद्धान्त
सुविधाहरू जापानी टायर योकोहामा F700Z
"Tavria" Zaz-1102: प्राविधिक विनिर्देशों र फोटो
विशिष्ट दोष मर्सिडीज 211
एक पल्ट देखि घर को बाह्य र आन्तरिक इन्सुलेशन
मातृत्व राजधानी कसरी प्रयोग गर्ने? मातृ पूंजी - बंधक
कसले राम्रो आशा को केप पत्ता, र के वर्षमा यो थियो
प्राग (प्राग अपरेसन) को मुक्ति कसरी? Prazhskaya सर्जरी: परिणाम
सोशलाइट इल्या Bachurin
बच्चाहरु भेंट रूस। भेंट बच्चाहरु संग काम। एक किंडरगार्टन मा भेंट बच्चाहरु। एक भेंट बच्चा छ ...
छोटकरीमा सैमसंग इतिहास, उपलब्धिहरू, देश-निर्माता सैमसंग बारेमा
राम्रो नाम कसरी लेख्न?
त्रुटि कसरी समाधान गर्ने: "प्रक्रिया प्रविष्टि बिन्दु फेला परेन"?